The Buddha (BC 623-BC 543) : အာနာပါန Anapana သမထ Samatha ဝိပဿ နာ Vipassana by- อาจารย์ Myint Kywe
အာနာပါန Anapana, သမထ Samatha,
(อาจารย์ มิตร จอย)
အာနာပါနကျင့်စဉ် သည် အလွန်ရှေးကျသော တရားကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သမထ Samatha (calm and concentration) ဟူသည် အာရုံခြောက်ပါး၌ လွင့်ပါးချောက်ချား၍ နေသောစိတ်ကို တစ်ခုတည်းသော အာရုံ၌ သတိ(Right mindfulness) စွဲမြဲစွာ သက်ဝင် စေ၍ စူးစူးစိုက်စိုက်သမာဓိ(Right Concentration) တည်တည်တံ့တံ့ ရှုခြင်းသဘောဖြစ်သည်။ အာနာပါန သမထ သည် ထွက်လေ၀င်လေ ကို အဖန်ဖန် အထပ်ထပ် ရှုရသော သတိပဌာန်ကို ခေါ်ပါသည်။ ထွက်လေ ၀င်လေကို သတိနဲ့ ၀င်၊ သတိနဲ့ထွက်စေရမည်။ ထွက်လေ ၀င်လေကိုသာ မမေ့တဲ့ သတိကောင်းကောင်းနဲ့ ထွက်တိုင်း ၀င်တိုင်း ထွက်လေကို လိုက်သိနေပါ၊ ၀င်လေကို လိုက်သိနေပါ၊ သတိအလုပ် မမေ့စေနဲ့၊ မမေ့ရ ပါ၊ အာနာပါန သည် “ထွက်သက် ၀င်သက် “ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ၏၊ ထို့ကြောင့် အာနာပါနရူမှတ်ပွားများနည်းဆိုသည်မှာ.. ထွက်သက် ၀င်သက်(ထွက်လေ၊ ၀င်လေ) ကို သတိကပ်၍ ရူမှတ်ပွားများရသော နည်းဖြစ်သည်။
အာနာပါန ရူမှတ်သူသည် ထွက်လေ ၀င်လေတိုးထိရာ နှာသီးဖျားကို သတိစိုက်၍ ထွက်လျှင် ထွက်လေ၊ ၀င်လျှင် ၀င်လေဟု အဖန်ဖန် နှလုံးသွင်းရူမှတ်ရမည်။ ဤအခြေခံ ရူမှတ်သည့်အဆင့်တွင် အသက်ကို ရှူသွင်း ရှူထုတ်တိုင်း ရှူသွင်း ရှူထုတ်မှန်းသိအောင် သတိထားရမည်၊ ထို့ပြင် ထွက်လေ ၀င်လေကို နှာသီးဖျားတွင် သတိကပ်ရူမှတ်ရမည်။ ထွက်လေ ၀င်လေနောက်သို့ စိတ်ကလိုက်ပါပြီး မရှူမှတ်ရ၊ နှာသီးဖျား၌ သတိကပ်ထားပြီး ၀င်တိုင်း ထွက်တိုင်း သိသိနေရပါမည်၊ ထွက်လေ ၀င်လေ နှာသီးဖျား၌ တိုးနေ ထိနေသည်ကို သိရမည်၊ သတိကောင်းလေ ပို၍ ထင်ရှားလာလေ ဖြစ်လိမ့်မည်။ နှာသီးဖျား၌ စိတ်စိုက်ထားပြီး ထွက်လေ ၀င်လေ ကို ထွက်လျှင် ထွက်မှန်းသိ၊ ၀င်လျှင် ၀င်မှန်းသိနေအောင် ရူမှတ်ရမည်။ အချုပ်အားဖြင့် ဤအခြေခံရူမှတ်ခြင်းသည် သတိကို ဦးစားပေးထူထောင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အာနာပါနကို ရူမှတ်ပွားများသူသည် -
(၁) စိတ်ငြိမ်သက် အေးချမ်းခြင်း၊
(၂) မှန်ကန်စွာ တွေးခေါ်ကြံစည်နိုင်ခြင်း၊
(၃) ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစွာ နေရခြင်း၊
(၄) စတုက္ကနည်းအရ ရူပါဝစရဈာန် ၄-ပါးကို ရနိုင်ခြင်း၊
(၅) သတိပဋ္ဌာန်(၄)ပါး၊ ဗောဇ္ဈင် (၇)ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံခြင်း၊
(၆) ဘ၀၏နောက်ဆုံး ထွက်သက် ၀င်သက်ကို သိခြင်း၊
(၇) မိမိ၏ အသက်အပိုင်းအခြားကို သိခြင်း၊
(၈) မဂ်ဖိုလ်၏ အခြေခံကိုရရှိခြင်း၊
အစရှိသော အကျိုးတရားများကို မျက်မှောက်ဘ၀၌ပင် ခံစားရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဝိပဿ နာ အလုပ်သည် မဂ်ချမ်းသာ၊ ဖိုလ်ချမ်းသာတွေရရှိစေပါသည်။ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရစေ ပါသည်။ ကိလေသာများစင်ကြယ်ပြီး နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်ထိတက်လှမ်းနိုင်ပါသည်။ ဒါန- သီလ- သမထ ကုသိုလ်များ က အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရုံသာ ပေးနိုင်ပါသည်။ နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်မရောက်နိုင်ပါ။ နိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်း ကြောင်းမှာလည်း ဒါန သီလ သမထ ကုသိုလ်များရှိရပါသည်။
ဒါန- သီလ- သမထ သည် နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက် မရောက်နိုင်ပါ။ နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင် ရအောင် အထောက်အပံ့လောက်တော့ပေးနိုင်ပါသည်။ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုစေနိုင်သော ကုသိုလ်သည် ဝိပဿ နာ ကုသိုလ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ လောဘ၊ ဒေါသ ၊ မောဟ စတဲ့ ကိလေသာတွေစင်ကြယ်စေပါသည်။ ဝိပဿ နာ အလုပ်သည် စိတ်ဆင်းရဲမှုများမှ လွန်မြောက်စေခြင်း။ ကိုယ်ဆင်းရဲမှုများမှ လွန်မြောက်စေခြင်း။ မဂ်ဥာဏ်ဖိုလ်ဥာဏ်များကိုရရှိစေခြင်း။ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်း။ ကိလေသာစင်စေခြင်း။ အကျိုးတရား များ ရနိုင်ပါသည်။ သမထ နှင့် ဝိပဿ နာ သည် Two-In-One အစုံလိုက် ထူထောင်ရသော တရားနှစ်ပါးဖြစ်သည်။
ဝိပဿ နာ Vipassana ဆိုသည်မှာ အရှိကိုအရှိအတိုင်း မှန်ကန်စွာသိမြင်ခြင်း၊ အထူးရှုမှတ်ခြင်း ဟု အဓိပ္ပါယ်ရရှိသည်။ တရားရှုမှတ်ခြင်းသည် အရာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်လေ့ကျင့်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ရှုမှတ်ခြင်းဖြင့် လေ့ကျင့်သူသည် “သိစိတ်ပျံ့လွင့်စိတ်” ကို ကျော်လွန်ပြီး စိတ်အနားပေးခြင်း (သို့မဟုတ် ) အထူးရှုမှတ်ခြင်း (သို့မဟုတ် ) သိမှတ်နေခြင်း၏ အနက်ရှိုင်းဆုံးသောအဆင့် သို့ ရောက်ရှိရန် ကြိုးပမ်း အားထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ သည် (ခရစ်တော်မပေါ်မီ ဘီစီ ၅၈၈) လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၂၆၀၂ ကျော် မဟာသက္ကရာဇ်(၁၀၃) ခု ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် စတင် ပွင့်ထွန်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃) ခု ဝါဆို လပြည့် စနေနေ့ ဘီစီ(၅၈၈) မှာ ဓမ္မရတနာ စတင်ခဲ့သည်။ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃)ခု ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၂ ရက် ဘီစီ (၅၈၈) တွင် သံဃာရတနာ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။
ဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဝိပဿ နာ နှင့် ဝိပဿ နာကျင့်စဉ်ကို ဘီစီ (၅၈၈) လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၂၆၀၂ -ကျော်တွင်ပထမဆုံးသော စတင်တွေ့ရှိကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် ဘုရားအဖြစ်နှင့် (၄၅) နှစ်နေပြီး မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ ခု ကဆုန်လပြည့် နေ့ ဘီစီ ၅၄၃ မှာ ပရိနိဗ္ဗာန် စံလွန်တော်မူသည်။ ဗုဒ္ဓအဖြစ် (ဘီစီ ၅၈၈ - ဘီစီ ၅၄၃ ) ၄၅ နှစ်အတွင်း တာဝန်ကြီး ၂ ရပ်ကို တစ်နေ့လျှင် ၂၂ နာရီ မိနစ် ၂၀ ခန့်မျှ နေမအား ညမနား လူသား, သတ္တဝါတို့၏ ကောင်းကျိုးကို မျှော်ကိုး၍ ထမ်းဆောင်တော်မူခဲ့သည်။
သမထ Samatha နှင့် ဝိပဿ နာ Vipassana တရားရှုမှတ်ကျင့် ကြံအားထုတ်ခြင်းသည် ထင်ရှားသည်။ သမထ Samatha နှင့် ဝိပဿ နာ Vipassana နှစ်မျိုးစလုံးသည် ဉာဏ်အလင်းရရှိရန်အတွက်လိုအပ်သည်။ သမထ တွင်အမှတ်တစ်ခုတည်းအာရုံစိုက်ကြည့်ခြင်း စိတ်တည်ငြိမ်မှုစွမ်းရည်ကိုတိုး တက်ဖြစ်ထွန်းအောင်လေ့ကျင့်အားထုတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဝိပဿ နာ သည် ပကတိသဘာဝအမှန်များကိုရှုမြင်ခြင်းအားဖြင့် ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့် ပညာတို့ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုး လာစေရန်ဖြစ်သည်။ (Vipassana in the Buddhism means insight into the true nature of reality, namely as the Three marks of existence: impermanence, suffering or unsatisfactoriness, and the realisation of non-self)
ဝိပဿ နာ အကျိုးကြီးမားပုံ …
မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည်မွန် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံးတော်မူနေစဉ်အခါ၌ ကျောင်းဒါယကာကြီး အနာထပိဏ် သူဌေးအား အလှူဒါနနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေလာမသုတ် တရားတော်ကို မိန်.တော်မူသည်။
၁။ ဝေလာမသုတ်တရားတော် အကျဉ်းချုပ်ကား … ရှေးအခါက ဝေလာမ အမည်ရှိ ပုဏ္ဏားသူဌေးကြီးသည် မဟာဒါနအလှူတ်ာကို ပေးလှူ၏။ ယင်းအလှူ၌ ငွေဒင်္ဂါး အပြည့်ပါသော ရွှေခွက်ကြီး ရှစ်သောင်းလေးထောင်၊ ရွှေဒင်္ဂါး အပြည့်ပါသော ငွေခွက်ကြီးပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင် စသည်ဖြင့် ရှစ်သောင်းလေးထောင်ပေါင်း များစွာသော ရတနာ ခုနှစ်ပါး ဆင်မြင်းကျွဲနွား၊ အဝတ်အထည် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းအစုံပေါင်း များစွာကို ပေးလှူသည်။ အလှူတော်ကြီးသည်ကား မြစ်ရေအလျင်ကြီး တရဟောစီးသကဲ့သို. အကြီးအကျယ်လှူခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
၂။ သာသနာပ အခါ၌ ဤမျှကြီးကျယ်သော ဝေလာမပုဏ္ဏား၏ မဟာအလှူတော်ကြီးသည် သာသနာတော်တွင်း၌ အယူသီလနှင့်ပြည့်စုံသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူဝတ်ကြောင်တစ်ယောက်အား ထမင်းတစ်ထပ် ပေးလှူ ရသလောက် အကျိုးမကြီးချေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူဝတ်ကြောင် တစ်ယောက်အား ထမင်းတစ်ထပ် ပေးလှူ ရသည်က အကျိုးပို၍ ကြီးမားသည်။
၃။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူဝတ်ကြောင်တစ်ရာကို ကျွေးမွေးပေးလှူ ရသည်ထက် သောတာပန်တစ်ယောက်အား ပေးလှူ ရသည်က အကျိုးပို၍ ကြီးမားသည်။
၄။ သောတာပန်တစ်ရာကို ပေးလှူ ရသည်ထက် သကဒါဂါမ် တစ်ယောက်အား ပေးလှူ ရသည်က အကျိုးပို၍ ကြီးမားသည်။
၅။ သကဒါဂါမ်တစ်ရာကို ပေးလှူ ရသည်ထက် အနာဂါမ် တစ်ယောက်ကို ပေးလှူ ရသည်က ပို၍ အကျိုး ကြီးမားသည်။
၆။ အနာဂါမ်တစ်ရာကို ပေးလှူ ရသည်ထက် ရဟ န္တာတစ်ပါးကို ပေးလှူ ရသည်က ပို၍ အကျိုးကြီးမားသည်။
၇။ ရဟ န္တာတစ်ရာကို ပေးလှူ ရသည်ထက် ပစ္စေကဗုဒ္ဓါတစ်ပါးကို ပေးလှူ ရသည်က ပို၍ အကျိုးကြီးမားသည်။
၈။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါတစ်ရာကို ပေးလှူ ရသည်ထက် သဗ္ဗညုဘုရားတစ်ဆူကို ပေးလှူရသည်က ပို၍ အကျိုးကြီးမားသည်။
၉။ ဘုရားရှင်အားပေးလှူ ရသည်ထက် သံဃိကကျောင်းတစ်ဆောင် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းရသည်က ပို၍ အကျိုးကြီးမားသည်။
၁၂။ ထို.ထက် မေတ္တာဘာဝနာကို နံ.သာတစ်ခါရှူမျှ ပွားခြင်းက ပို၍ အကျိုးကြီး၏။
၁၃။ ထို.ထက် အနိစ္စဝိပဿနာ ဘာဝနာကို နို.တစ်ညှစ်မျှ ပွားခြင်းက ပို၍ အကျိုးကြီးမား၏။ …ဟူ၍ ဟောကြားတော်မူပေသည်။
ယင်းတရားအားလုံးကို ခြုံ၍ သုံးသပ်လိုက်သောအခါ …
(၁) မှ(၉) အထိသည် … ဒါန ကုသိုလ်တရားမျိုး ဖြစ်သည်၊
(၂) မှ(၁၁) အထိသည်… သီလ ကုသိုလ်တရားမျိုး ဖြစ်သည်၊
(၁၂) မှာ သမထဘာဝနာ ကုသိုလ်မျိုး ဖြစ်၍ (၁၃) မှာ ဝိပဿနာ ဘာဝနာ ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်သည်။
သို.ဖြစ်၍ မြတ်စွာဘုရားသည် ဤဝေလာမသုတ်တော်ဖြင့် …. ဒါနကုသိုလ်ထက် သီလကုသိုလ်မျိုးက မြတ်သည်၊ သီလကုသိုလ်မျိုးထက် သမထ-ဘာဝနာ ကုသိုလ်မျိုးက မြတ်သည်၊ သမထ ဘာဝနာကုသိုလ်မျိုးထက် ဝိပဿနာဘာဝနာ ကုသိုလ်မျိုးက မြတ်သည် ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်တော် မူကြောင်းကို သိရှိရပေသည်။ ဤသည်ကို သိရှိခြင်းဖြင့် ဝိပဿ နာ ဘာဝနာသည် မည်မျှ အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားသည်ကို နှိုင်းယှဉ် သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(ကျော်နန္ဒအောင် ၏ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ကြီးများ၏ ဝိပဿ နာရှုနည်းများ ပထမတွဲမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။)
အာနာပါန Anapanasati သည် သမထကျင့်စဉ် ၏ အစ တာထွက်ဟု ပြောနိုင်သော်လည်း အဆင့်အမျိုး မျိုးကိုဖြတ်သန်းသွားပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဝိပဿ နာကျင့်စဉ်သို့ ရောက် ရှိအဆုံးသတ်သွားသည်။
ဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဝိပဿ နာ ကျင့်စဉ်ကို ဘီစီ ၅၈၈ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း၂၆၀၂ -ကျော်တွင်ပထမဆုံးသော စတင်တွေ့ရှိကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ မိမိ၏ခန္ဓာကိုယ်ကို မိမိကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ မတင့်တယ်သော စိတ်တို့ကို ဖြူစင်စေသော ကျင့်စဉ်ဖြစ်သည် ။ မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို မိမိကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ မတင့်တယ်သော စိတ်တို့ကို ဖြူစင်စေသော ကျင့်စဉ်ဖြစ်သည် ။ ပြန့်လွင့်နေသောစိတ်ကို စုစည်းနိုင်ရန်အတွက် ပုံမှန်အတိုင်း အသက်ရှုမှုကို အာရုံစူးစိုက်ပြီး စတင်ရှုမှတ်လေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်ကြရသည်။
စိတ်သည် တည်ကြည်စူးရှမှုရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို အာရုံစူးစိုက်၍ ရှုမှတ်ခြင်းဖြင့် ရုပ်သည်လည်းကောင်း၊ စိတ်သည်လည်းကောင်း၊ ခဏမစဲ မရပ်မနား ပြောင်းလဲနေကြသောတရား၊ စကြာဝဋ္ဌဌာတစ်ခုလုံး၏ သဘာဝဓမ္မ အမှန်တရားကို တွေ့ရှိလာသောအခါ မမြဲခြင်း သဘာဝ ( အနိစ္စ impermanent (anicca)၊ ဆင်းရဲခြင်း( ဒုက္ခ suffering (dukkha) နှင့် အစိုး မရသော( အနတ္တ Egolessness /not-self (anatta) သဘော သဘာဝ အမှန်တို့ကို သိရှိကြသည်။ ဤကဲ့သို့ အမှန်တရား ဓမ္မလက္ခဏာကို ကိုယ်တိုင်ကိုကြ တိုက်ရိုက်သိလာသောအခါ စိတ်အတွင်း၌ မတင့်တယ် မစင်ကြယ်မှုများမှ လွတ်မြောက်၍ စိတ်ကို ဖြူစင်မှု ဖြစ်စေသော တရားကျင့်စဉ်ဖြစ်သည်။
ဝိပဿ နာကျင့်စဉ်၏ ရည်မှန်းချက်သည် စိတ်၏ အထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်ပြီး၊ သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ ပညာ-ဉာဏ်စဉ်အဆုံးတိုင် ပေါက်ရောက်စေရန် ဖြစ်ပေသည်။ ဉာဏ်စဉ် ၁၆ ပါး ရှိသည်။ ကြိုးစားပြီး ဆက်လက်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပါလျှင် အားထုတ်သူ၏ နေ့စဉ်ဆင်းရဲ ပင်ပန်းမှုများမှ သက်သာစေပြီး ယခင်အကျင့်ဟောင်းပုံစံများ၏ တည်ငြိမ်မှုမရှိသော တုန့်ပြန်မှုများတို့ဖြင့် နှစ်သက်သာယာဖွယ်၊ မနှစ်သက်သာယာဖွယ် ကိစ္စများ ကြုံရသောအခါ စိတ်ထဲတွင် ထုံးဖွဲ့ချည်နှောင်မှု၊ ဆင်းရဲမှု အစိုင်အခဲများစွာ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့မှ ဖြေလျော့ပြီးလျှင် ချမ်းသာမှုများ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ဝိပဿ နာကျင့်စဉ် သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက သင်ကြားပေးခဲ့သည် မှန်သော်လည်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အတွက်သာ မဟုတ်ပဲ လူအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သောကျင့်စဉ် ဖြစ်သည်။ စကြာဝဌာ ရှိ အားလုံးသောလူတို့အတွက် ဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်စေသော နည်းလမ်း သာဖြစ်သည်။
ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး က “သီလ ဆောက်တည်ပြီးလျှင် ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်ကြ၊ ဖြည့်လို့ ပြည့်စုံပြီ ဆိုလျှင် မိမိစိတ်အလို တောင့်တတဲ့အတိုင်း ပြီးမယ်၊ ယခုလည်း ချမ်းသာမယ်၊ နောင်လည်း ချမ်းသာမယ်။ ပစ္စုပ္ပန် ချမ်းသာ၊ သံသရာ ချမ်းသာ ၂-ဖြာကို ပေးစွမ်းနိုင်တာဟာ ဘုရားရှင် အဆုံးအမတော်က လွဲလို့ တခြားမရှိဘူး။ ဘုရားရှင် အဆုံးအမဆိုတာ ပိဋက ၃-ပုံပဲ၊ ပိဋက ၃-ပုံ ဆိုတာ အလွန် ကျယ်ဝန်းတယ်။ ပိဋက ၃-ပုံကို အဆီ ထုတ်ပါလျှင် “ဗောဓိပက္ခိယ ၃၇-ပါး” ရတယ်၊ ဗောဓိပက္ခယ တရား ၃၇-ပါးကို အဆီ ထုတ်လျှင် “မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး” ရတယ်။ မဂ္ဂင် ရှစ်ပါးကို အဆီထုတ်လျှင် “သိက္ခာ သုံးပါး” ရတယ်။ သိက္ခာ သုံးပါးဆိုတာ အဓိသီလ၊ အဓိစိတ္တ၊ အဓိပညာ ပါပဲ။သိက္ခာသုံးပါးကို အဆီထုတ်လျှင် “ဧကော ဓမ္မော” တစ်ခု ရတယ်။ ရုပ်ပေါ် နာမ်ပေါ်မှာ နေပြီး ယခုလို ဆောင်ထားတော့ (ရှုမှတ်နေတော့) ကာယကံ သောင်းကျန်းမှု၊ ဝစီကံ သောင်းကျန်းမှု မရှိဘူး။ ဒါ “အဓိသီလ” လို့ ခေါ်တယ်။ အဓိသီလ အားကောင်းလျှင် စိတ်တွေ သောင်းကျန်းမှု မရှိဘဲ ငြိမ်ဝပ် ပိပြားပြီး တည်နေတော့တယ်။ အဲဒါ “အဓိစိတ္တ” လို့ ခေါ်တယ်။ အဓိစိတ္တ (သမာဓိ) အားကောင်းလို့ အချိန်ကြာလျှင် ဘယ်လူ၊ ဘယ်နတ်၊ ဘယ်ဗြဟ္မာမှ ဖန်တီးလို့ မဖြစ်ဘူး၊ လျှပ်တစ်ပြတ်အတွင်း ကုဋေတစ်သိန်း ဖြစ်ပြီး ပျက်နေတယ်။ ရုပ်ကို နာမ်က သိနေလျှင် ဖြစ်ပျက်ကို သိတော့တာပဲ၊ ဖြစ်ပျက်ကို သိတာ “အဓိပညာ” လို့ ခေါ်တယ်။
အများနားလည်အောင် ပြောရမယ်ဆိုလျှင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ နှာဖျား နှာဝတွင် ထွက်လေ ဝင်လေ နှစ်ရပ်ဟာ အမြဲ တိုက်ဝင်၊ တိုက်ထွက် နေတယ်။ နှာဖျား နှာဝ မှာ ကာယပသာဒ အကြည်က အထိခံ၊ ထွက်လေ ဝင်လေဖြစ်တဲ့ လေနှစ်ရပ် ဝါယော ဖောဋ္ဌဗ္ဗက ထိတယ်၊ ထိုအထိခံနဲ့ ထိတာက ရုပ်၊ သိတာက နာမ် ဆိုတော့ ဒကာကြီး၊ ဒကာမကြီးတို့ သူများ မေးမနေနဲ့၊ ကိုယ့်နှာဝကို ဉာဏ်နဲ့ စောင့်ကြည့်၊ ဝင်တော့ ထိဝင်မယ်၊ ထွက်တော့လည်း ထိထွက်မယ်။ ထိတာကို သိလျှင် သိနေလျှင် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ဖြစ်ခွင့် မရလို့ လောဘမီး၊ ဒေါသမီး၊ မောဟမီး ငြိမ်းတယ်၊ ငြိမ်းတော့ အေးတယ်။ မထိခင်ကလည်း သိလို့ မဖြစ်ဘူး၊ ထိပြီး ပြန်တော့လည်း သိလို့ မဖြစ်ဘူး၊ ထိတုန်းကိုသာ သိဖြစ်တယ်၊ အဲဒါကို “ပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့်” လို့ ဆိုတယ်။အဲသလို တစ်ထိတည်း(ထဲ) ထိနေတာကို တစ်ဆက်တည်း(ထဲ) သိနေအောင် ဆောင်ကြဗျ။ တစ်ရက် ၂၄-နာရီ တစ်စပ်လောက် ရလျှင် အလွန် သိသာပါတယ်။ အဲသလို ထိတာကို မသိမှတ် နိုင်ရင် လျှပ်တစ်ပြတ် အတွင်းတွင်ပဲ ကုဋေတစ်သိန်း ကြွေးတင် သွားရောဗျ။ ထိတာကို သိနေလျှင် “ရုပ်နှင့် နာမ်သာ ရှိပါကလား” လို့ သိလိမ့်မယ်။
ရုပ်နာမ် မှ တစ်ပါး ငါ၊ သူတစ်ပါး၊ ယောကျာ်း၊ မိန်းမ မရှိဘူးဆိုတာ “ဘုရားရှင်၏ တရားတော် အမှန်ပါလား” လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိလိမ့်မယ်။ သူများကို မေးနေဖို့ မလိုပါဘူး၊ နှာဝမှာ လေထိတာကို သိနေလျှင် ထိုအချိန်မှာ အတ္တဆိုတဲ့ ကိုယ်မရှိဘူး။ထို သိနေတဲ့ အချိန်မှာ ဉာဏ်အမြင် စင်ကြယ်တယ်၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်တယ်။ ထိတာကို သိနေတဲ့ အချိန်မှာ “ရုပ် နာမ် မှတစ်ပါး ဘာမျှ မရှိပါကလား” လို့ သိတာကို နာမ်ရုပ် ပိုင်းခြားပြီး သိလို့ “နာမရူပ ပရိစ္ဆေဒဉာဏ်” လို့ ခေါ်တယ်။ တစ်ထိတည်း(ထဲ) ထိ၊ တစ်သိတည်း(ထဲ) သိနေလျှင် အတ္တစင်၍ ဉာဏ်အမြင် စင်ကြယ်တဲ့ အကျိုးရတယ်၊ ဒါဟာ တဒင်္ဂပဟာန် ခဏ အချိန်လေးမှာ ရတဲ့ အကျိုး၊ နည်းတယ်လို့ မမှတ်ကြနဲ့။ “ကမ္မဋ္ဌာန်း ထိုင်ရတာများ ဘာမှလည်း မတွေ့ပေါင်၊ ဘာမှလည်း မရပေါင်” လို့များ မမှတ်လိုက်ကြ ပါနဲ့။ ဘုရား သာသနာနဲ့ ကြုံကြိုက်တဲ့ အခါမှာ ဒီလို အကျိုးထူးများ ရနိုင်တယ်။ စားဖို့ သောက်ဖို့ အသာထားပြီး အထူး ကြိုးစားကြ…
သီလ ကို ပြည့်စုံအောင်စေတိယင်္ဂဏဝတ်၊ ဗောဓိယင်္ဂဏဝတ်၊ ဆရာသမား မိဘဝတ်၊ သားမယားဝတ် ဒါတွေ လုပ်ရတာက စရဏ ကုသိုလ် သီလဘက်ကဗျ။ ဒါတွေ လုပ်ရင်းနဲ့ ဆောင်လို့၊ ရှုမှတ်လို့ကော မရဘူးလား။ ဒီဝတ်တွေ မဖြည့်ဘဲနဲ့ သီလ ပြည့်စုံပါ့မလား၊ သီလ မပြည့်စုံရင် လိုလား တောင့်တတဲ့ ချမ်းသာကော ရပါ့မလားဗျာ။ ချမ်းသာမှု မရှိရင် သမာဓိ မရဘူး၊ သမာဓိ မရတော့ ပညာလည်း မရနိုင်ဘူးဗျ”…. လို့ ဟောကြားတော်မူသည် ။
ဉာဏ်စဉ် ၁၆ ပါး (The Sixteen Stages of Insight)
(၁) နာမ ရူပ ပရိစ္ဆေဒဉာဏ် (ခွဲခြား) -ဘုံသုံးပါး၌ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးကို ပိုင်းခြား၍ သိသောဉာဏ်၊ Namarupa Pariccheda Nana (Knowledge to distinguish mental and physical states)
(၂) ပစ္စယ ပရိဂ္ဂဟဉာဏ် (သိမ်းဆည်း)-ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး၏ ဖြစ်ကြောင်းတရားကို သိမ်းဆည်းသောဉာဏ်၊ Paccaya Pariggaha Nana (Knowledge of the cause-and-effect relationship between mental and physical states)
(၃) သမ္မသနဉာဏ် (လက္ခဏာ) ဖြစ်ပျက်မြင်သုံးသပ်၍ရှု- ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးအား အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ လက္ခဏာ သုံးပါးဖြင့် သုံးသပ်၍ရှုသောဉာဏ်။ Sammasana Nana (Knowledge of mental and physical processes as impermanent, unsatisfactory and non self)
(၄) ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ် (ဖြစ်ပျက်) ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး ခန္ဓာငါးပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းကိုအဖန်တလဲလဲရှုသောဉာဏ်။ Udayabbaya Nana (Knowledge of arising and passing away)
(၅) ဘင်္ဂဉာဏ် (ပျက်) ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးတို့၏ ပျက်ခြင်းကိုသာ အဖန်တလဲလဲ ရှုသောဉာဏ်။ Bhanga Nana (Knowledge of the dissolution of formations)
(၆) ဘယ ဉာဏ် (ကြောက်) ခန္ဓာငါးပါးရုပ်နာမ်နှစ်ပါးကို ကြောက်မက်ဖွယ်ဘေးကြီးဟု အဖန်တလဲလဲ ရှုသောဉာဏ်။ Bhaya Nana (Knowledge of the fearful nature of mental and physical states)
(၇) အာဒီနဝဉာဏ် (အပြစ်ရှာ) ဖြစ်ပျက်မုန်း- ခန္ဓာငါးပါးရုပ်နာမ်နှစ်ပါးတို့အား အပြစ်အားဖြင့် ရှုသောဉာဏ်။ Adinava Nana (Knowledge of mental and physical states as unsatisfactory)
(၈) နိဗ္ဗိဒါဉာဏ် (ငြီးငွေ့) ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးတို့၌ ငြီးငွေ့သောအစွမ်းအားဖြင့် ရှုသောဉာဏ်။ Nibbida Nana (Knowledge of disenchantment)
(၉) မုစ္စိတုကမျတာဉာဏ် (လွတ်) ခန္ဓာငါးပါးတို့မှ လွတ်မြောက်ခြင်းငှါ ရှုသောဉာဏ်။ Muncitukamayata Nana (Knowledge of the desire to abandon the worldly state)
(၁၀) ပဋိသင်္ခါဉာဏ် (အဖန်တလဲလဲ) ခန္ဓာငါးပါးတို့အား သိမ်းဆည်းခြင်းအစွမ်းဖြင့် အဖန်တလဲလဲ ရှုသောဉာဏ်။ Patisankha Nana (Knowledge which investigates the path to deliverance and instillsadecision to practice further)
(၁၁) သင်္ခါရုပေက္ခာဉာဏ် (ဥပေက္ခာ) ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ ကြောက်ခြင်း နှစ်သက်ခြင်းနှင့် လျစ်လျူရှုသောဉာဏ်။ Sankharupekha Nana (Knowledge which regards mental and physical states with equanimity)
(၁၂) အနုလောမ ဉာဏ် (လျော်) - လက္ခဏာသုံးပါးကို ရှုသည်၏အဖြစ်ဖြင့် မဂ်အားလျော်စွာရသော သတိပဋ္ဌဌာန်စသော ဗောဓိပက္ခိယ တရား (၃၇) ပါးတို့အားလျော်စွာ ဖြစ်သောဉာဏ်။ Anuloma Nana (Knowledge which conforms to the Four Noble Truths)
အရိယာဉာဏ် ၄ ပါး
(၁၃) ဂေါတြဘူဉာဏ် (လွှဲ) -ပုထုဇဉ်အနွယ်ကို ဖြတ်၍ အရိယာအနွယ်ကို ဖြစ်စေသောဉာဏ်၊ Gotrabhu Nana (Knowledge of deliverance from the worldly condition)
(၁၄) သောတပတ္တိ ‘မဂ်’ ဉာဏ် (ဆိုက်) -နိဗ္ဗာန်ကို သိမြင်သော မဂ်ဉာဏ်၊ Magga Nana (Knowledge by which defilements are abandoned and are overcome by destruction)
(၁၅) သောတပတ္တိ ‘ဖိုလ်’ ဉာဏ် (ခံစား)- နိဗ္ဗာန်ကို ခံစားသိမြင်သော ဖိုလ်ဉာဏ်၊ Phala Nana (Knowledge which realizes the fruit of the path and has nibbana as object)
(၁၆) ပစ္စဝေကဉာဏ် (သုံးသပ်) ရခဲ့ပြီး တရားတို့ကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်သုံးသပ်သောဉာဏ်။ Paccavekkhana Nana (Knowledge which reviews the defilements still remaining) အသင်္ခ္တဓါတ်၊ နိဗ္ဗာနဓါတ်၊ နိဗ္ဗာန် -‘အရှုခံ’ မှန်ရမည်။ ‘ရှုဉာဏ်’ မှန်ရမည်။